ဂျိုး အမတေဥရှာပုံတော် (ဇတ်သိမ်းပိုင်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဂျိုး အမတေဥရှာပုံတော် (ဇတ်သိမ်းပိုင်း)
ဂျိုး အမတေဥရှာပုံတော် (ဇတ်သိမ်းပိုင်း)
Posted by မောင်ရိုး on Jan 7, 2014 in Creative Writing | 16 comments
ဒုတိယ​နေ့ တွင်​ ​ဇော်​ဂျီ​မြှောင်​၏ အ​​ရှေ့​တောင်​ဘက်​သို့ ထွက်​လာခဲ့ကြပါသည်​ ။
သစ်​ပင်​များထူထပ်​ရာ ​တောင်​ကြား ၊ကုန်းရိုး နှင့်​ လျှိုအစပ်​များကိုသာဦးတည်​ခဲ့ကြပါ၏။
ဤ​နေရာသည်​ ဖထီးနှင့်သူ့ရွာသားများအမြဲလာ​နေကျ ဆားကွင်းဖြစ်​သည်​ဟုသိရ​လေသည်​ ။
ဆားကွင်း ဟူသည်​မှာ ထို​နေရာတဝိုက်​တွင်​ စမ်း​ရေ​ပေါက်​​သော​ကြောင့်​ အနည်းငယ်​စိုထိုင်း​နေပြီး
​မြေကြီးမှာ အငန်​ဓာတ်​ရှိသည်​ ဟု …။
ထို့​ကြောင့်​ ​တော​ကောင်​များတခါတရံလာတတ်​ပြီး ထို​မြေကြီးကို လျက်​တတ်​​လေသည်​ ။
ဤသည်​ကိုသိ​သော ဖထီးတို့က ​စောင့်​ပြီးပစ်​ခတ်​ဖူး​လေသည်​ ။
​တောင်​ကြားအဝင်​သို့​ရောက်​သည်​နှင့်​ ခြုံနွယ်​များပိတ်​ဆို့​နေသဖြင့်​ လမ်းရှင်းရ​သေးသည်​ ။
ကျ​နော်​တို့၏ မူလကစိတ်​ကူးယဉ်​ခဲ့သမျှသည်​ ​တောတွင်းသို့​ရောက်​​သောအခါ ပျက်​ပြယ်​ သွားခဲ့ရပါပြီ ။
ထို့အတူ … ကြာဖူးခဲ့​သော ဂျိုးအမ​တေဥမှာလည်း အတုများဖန်​တီး၍ လိမ်​လည်​​ရောင်းချကြ​ကြောင်း
​နောက်​နှစ်​ရက်​​လောက်​လည်​ပြီးပါက ပြန်​ရန်​ဆုံးဖြတ်​မိသည်​ ။
ကျ​နော်​တို့ ​မျှော်​လင့်​ထားသလို လွယ်​လင့်​တကူရှာ​ဖွေ၍မရနိုင်​မှန်း
သိခဲ့ကြပြီဖြစ်​သည်​။ အကယ်​​၍များ ထိုဂျိုးအမြု​တေဥသည်​ ရှိခဲ့ရိုးမှန်​ပါကလည်း
​နေ့လည်​ပိုင်းအထိမနားမ​နေကြိုးစား၍ ရှာခဲ့ပါ​သော်​လည်း ငှက်​သိုက်​ ၃ ခုမျှသာ​တွေ့ခဲ့ပါသည်​ ။
ကျ​နော်​တို့ ယခုကဲ့သို့ ​တောထဲတွင်​လက်​နက်​​ကောင်း​ကောင်းမပါပဲ​နေနိုင်​ခြင်းမှာ ရိုးမကျားများမျိုးတုန်းသွားခြင်း၊ ​ပြောင်​နှင့်​စိုင်​တို့ မရှိနိုင်​​တော့ခြင်း နှင့်​ ​တောဆင်​ရိုင်းများသည်​လည်း
ရိုးမအတွင်းထဲ၌သာ​နေထိုင်​တတ်​ကြခြင်းတို့​ကြောင့်​ဖြစ်​​လေသည်​ ။ ​မြွေနှင့်​ ​တောဝက်​ရန်​​တော့ရှိပါ​သေးသည်​ ။
​ရှေ့ မှဦး​ဆောင်​သွား​နေ​သောဖထီးမှာ တုန့်​ကနဲရပ်​လိုက်​​လေသည်​ ။
ပြီး​နောက်​ ကျ​နော်​တိုအား သစ်​ပင်​​ပေါ်တက်​ရန်​ လက်​ဟန်​ဖြင့်​ပြ​ပါ​တော့သည်​ ။
​မျောက်​ရှုံးနှင့်​ မျိုးတင့်​မှာ နီးစပ်​ရာအပင်​​သို့တက်​သွားနိုင်​​သော်​လည်း
ဖထီးကိုကြည့်​လိုက်​​လေရာ သစ်​ပင်​တစ်​ပင်​ကိုကွယ်​၍ သူ၏ဒူး​လေးကို အသင့်​ပြင်​​နေသည်​ကို​တွေ့လိုက်​ရ​လေ​တော့သည်​ ။
ကျ​နော်​သိလိုက်​ပါပြီ ။ မမြင်​ရ​သေး​သော အန္တ​ရယ်​တခုခု​တော့​တွေ့ရ​တော့မည်​ ။
ကျ​နော်​လည်း သစ်​ပင်​တက်​မရသည်​ဖြစ်​၍ ဖထီးနှင့်​လက်​တကမ်းအကွာ၌ အသာကွယ်​၍ကြည့်​​နေမိ​လေ၏ ။
ကျ​နော်​ကြည့်​​နေစဉ်​အတွင်း ခြုံအကွယ်​အတွင်းမှ ခတ်​မဲမဲညစ်​ညစ်​ သဏ္ဍန်​တစ်​ခုတိုးထွက်​လာ​​လေ​တော့သည်​ ။
​တောဝက်​ ! ….ဟုတ်​ပါသည်​ ။ နှာ​ခေါင်းပွစိပွစိလုပ်​ရင်း ခြုံထဲမှထွက်​​ပေါ်လာ​လေရာ ကျ​နော်​အသက်​ပင်​မရှူရဲ …။
အသားများများပင်​တုန်​​နေသည်​ထင်​၏ ။ ​ပေ ၄၀ ..၅၀ခန့်​သာကွာသဖြင့်​ ​ပြေးလို့လွတ်​နိုင်​ဖွယ်​မရှိ​ပေ …။
ကျ​နော်​တို့အား​ဘေးတိုက်​အ​နေအထားဖြင့်​ ​မြေကြီးကို နှာ​ခေါင်းဖြင့်​ထိုးရင်း တ​ရွေ့​ရွေ့ထွက်​လာသဖြင့်​ ဖထီးမှာဒူး​လေးကိုအသာပင့်​ပြီးချိန်​​နေသည်​ကို​တွေ့လိုက်​ရ​လေ​တော့သည်​ ။
ဒူး​လေးပစ်​လွှတ်​သံအဆုံး … ​ထို​တောဝက်​သည်​ မြှားတံတန်းလန်းဖြင့်​ ” အူး ” ကနဲ​အော်​၍ ​ခေါင်းယမ်းလိုက်​သည်​ကို​တွေ့သည်​နှင့်​ ..
ကျ​နော်​သုတ်​​ခြေတင်​၍​ပြေးပါ​တော့သည်​ ။ လမ်းရယ်​လို့မရှိ​သော​တောတွင်း​ပြေးရသည်​ဖြစ်​၍
ရှိသ​မျှခြုံနွယ်​တို့ဖြင့်​ငြိခြင်း ၊ ကမူများ ချိုင့်​ခွက်​များကိုခလုတ်​တိုက်​ခြင်းများ​ကြောင့်​လဲပြိုခြင်းများဖြစ်​ရ​လေသည်​ ။ သို့​သော်​… ကျ​နော်​​နောက်​သို့လှည့်​မကြည့်​​တော့ပါ ။
​လဲလျှင်​ အတင်းကုန်းထပြီးသာ အသက်​လု​ပြေး​နေမိသည်​ ။ကျ​နော့​နောက်​မှလဲ
ဒီတချီ​တော့ …ကျ​နော်​​သေ​တော့မည်​ထင်​၏ ။ ပြူးထွက်​​နေ​သော​တောဝက်​၏ အစွယ်​ကြီးကိုမြင်​​ယောင်​ရင်း မိသားစုဝင်​များ ၊ချစ်​ခင်​ရ​သောသူများ ၊သူုယ်​ချင်းများ၏ ရုပ်​ပုံလွှာများ တန်းစီ၍ အာရုံထဲ​ပေါ်လာ​လေသည်​ ။
​နောက်​မှလိုက်​လာ​သော ​​တောဝက်​ကြီး၏​ခြေသံသည်​ နီးသထက်​နီးလာ​ပါပြီ …။
​တောထဲတွင်​ လူမသ်ိသူမသိ မရှုမလှ​ဖြင့်​​တောဝက်​ထိုးပြီး​သေ​ရ​သောကျ​နော့်​အဖြစ်​သည်​ ဆိုးဝါးလှသည်​..ဟု ..​တွေးရင်း ​မောသည်​ထက်​ပင်​​ပို​မောလာ​လေ၏ ။
​ပြေး​နေ​သော​ခြေလှမ်းများ တဖြည်းဖြည်း​လေးလံလာသည်​ ။
ကျ​နော့်​​နောက်​မှ တစုံရာမှခုန်​အုပ်​လိုက်​သည်​ကိုသိလိုက်​ရ​လေ​တော့သည်​ ။
ကျ​နော်​ မ​ရှောင်​တိမ်းနိုင်​ခဲ့ပါ ။ကျ​နော့်​ မျက်​လုံး​တွေပြာ​ဝေသွားသည်​ ။
ထို့​နောက်​… လုံး​ထေွးလျှက်​ ခြုံတစ်​ခု​ဘေးသို့လဲကျသွား​လေ​တော့သည်​ …။
” ​ကောင်​​လေး…​ကောင်​​လေး… သတိထား​လေ.. ”
” ဖထီး….ဖထီး.. ..​.”
ကျ​နော်​ အထစ်​ထစ်​အ​ငေါ့​ငေါ့ဖြင့်​ လဲကျ​နေရာမှ​ခေါ်​နေမိသည်​ ။
” ​အေး…ငါရှိတယ်​​ဝေ့..သတိထားပါဟ…​တောဝက်​ လိုက်​မလာပါဘူး …. ခွီး …”..
ထို့​နောက်​… ကျ​နော့်​အားသိုင်းဖက်​၍ချုပ်​ထားရာမှလွှတ်​​ပေးလိုက်​​လေ​တော့သည်​ ။
ကျ​နော်​..မ​သေ​သေးပါ ။ ယခုမှ ကျ​နော်​ ​သက်​ပြင်းချနိုင်​​​တော့သည်​ ။
ကျ​နော့်​​ဘေးတွင်​လည်း မျိူးတင့်​နှင့်​ ​မျောက်​ရှုံးတို့က ပြူးကြည့်​​နေကြသည်​ ။
” ​ကောင်​​လေးရာ…မင်းလုပ်​တာနဲ့ ​တောဝက်​ကြီးလွတ်​သွားတာ နာသကွာ…
မင်းက ​ကြောက်​ပြီးစွတ်​​ပြေးတာကိုး… မင်းကိုလိုက်​ဆွဲ​နေရတာနဲ့ပဲ …ကံ​ကောင်းလို့ကွာ..”
ဖထီးမှာ စိတ်​ပျက်​လက်​ပျက်​ဖြင့်​ မချိတင်​ကဲ​ပြော​လေသည်​ ။
” ကျ​နော်​က မြှားမှန်​သွား​တော့ လဲကျပြီထင်​တာ​လေ…မလဲပဲ ​အော်​ပြီး​ခေါင်း​ထောင်​လိုက်​​တော့ ..ကျ​နော်​တို့ကိုလိုက်​ပြီထင်​တာ​ပေါ့…ဒါ​ကြောင့်​စွတ်​​ပြေးတာ ဖထီးရဲ့..”
” ဘယ်​ကလာကွာ… မြှားတစ်​ချက်​နဲ့ဘယ်​လဲပါ့မလဲ.. ငါပစ်​တာ လက်​ပတ်​ကြားကွ.. ဒါ​ပေမယ့်​ အ​ကောင်​ကြီးတယ်​လကွာ..အ​ရေလဲထူတယ်​ကွ..ဒါဏ်​ရာရပြီး​ပြေးမှ ​နောက်​ကလိုက်​​ချောင်းပြီး​ဆော်​ရမှာ.. ခွီး … ”
“သိဘူး​လေဗျာ …ကျ​နော်​တနု့ကိုလိုက်​ထိုးပြီမှတ်​လို့ ​ပြေးတာဗျ… ”
“​အေး…​တောထဲမှာအဲ့လိုကျပ်​ကျပ်​​လုပ်​…. ​တောဝက်​ထိုး မ​သေပဲ လမ်း​ပျောက်​ပြီး​သေမှာ … မင်းကို လူခြင်းကွဲပြီးလမ်း​ပေိာက်​သွားမှာစိုးလို့ ငါကလိုက်​ဆွဲရတာကွ.. ”
” ဒါနဲ့များဖထီးရယ်​ …​နောက်​က​အော်​လိုက်​​ရော​ပေါ့…ကျ​နော့ဖြင့်​​တောဝက်​လိုက်​ထိုးပြီဆိုပြီး ​သေပြီမှတ်​​နေတာ.. ‘”
“အသံ ​ပေးလို့မရလို​ပေါ့ကွ… ငါ​အော်​လိုက်​မှ ဟိုဘက်​ကို​ပြေး​နေတဲ့ ​တောဝက်​​တွေ လိုက်​လာမှာ… ​ ဝှီးး … ”
ဤသို့ဖြင့်​စာရင်းချုပ်​​သော်​ …. ကျ​နော့်​တွင်​​ပေါက်​ပြဲဒဏ်​ရာများစွာဖြင့်​
​ထော့နဲ့​ထော့နဲ့လမ်း​လျောက်​ရင်း စခန်းချရာသို့ပြန်​ခဲ့ရ​လေ​တော့သည်​ ။
ကျ​နော်​​ပြေးသဖြင့်​ ဖထီမှထပ်​ကြပ်​မကွာ​ပြေးလိုက်​ရင်း လိုက်​ဆွဲခဲ့သည်​ ။ မျိုးတင့်​နှင့်​ ​မျောက်​ရှုံးတို့သည်​လည်း ဖထီးနှင့်​ကျ​နော်​​ပြေးသဖြင့်​ သစ်​ပင်​​ပေါ်မှခုန်​ချပြီး​ပြေးလိုက်​လားကြသည်​ ။
ဤသို့အ​ကြေး​ကောင်းကြ​လေ​သော​ကြောင့်​ .. အဖိုးတန်​လှ​သော ​ရေဘူးများ ၊ ထမင်းထုတ်​များနှင့်​ ဖထီး၏ မြှားတံများမှာ လမ်းတ​လျောက်​ ထွက်​ကျကုန်​​လေ၏ ။
ကျ​နော့်​ခါးတွင်​ချိတ်​ထား​သော ဓား​မြှောင်​သည်​ပင်​ ဘယ်​ခြုံကြား၌ ငြိခဲ့​လေမသိ ။
ဓားအိမ်​သာကျ​န်​​လေ​တော့သည်​ ။ စခန်းပြန်​​ရောက်​မှသာ ထမင်းချက်​ကြပြီး ည​နေစာနှင့်​ ညစာ ​ပေါင်း၍စားရ​လေ​တော့သည်​ ။ ထို့​နောက်​ ..ကျ​နော်​တို့စဉ်းစားရ​လေပြီ ။
ဤသို့ မ​ရေရာ​သော မလုံခြုံ​သောခရီးစဉ်​ကို ဖျက်​သိမ်းမလား… ​တောထဲ​တောင်​ထဲ အသက်​အဆုံးခံမလား…? ။
ကျ​နော်​တို့ လူငယ်​သုံး​ယောက်​ ညီညွတ်​ကြပါသည်​ ။ မနက်​ဖြန်​…​စော​စောပြန်​ကြမည်​ ..ဟု …
ထိုညက လင့်​စင်​​ပေါ်​တွင်​ ကျ​နော်​အိပ်​မ​ပျော်​နိုင်​ခဲ့ပါ ။ အိမ်​ပြန်​ရ​တော့မည်​ဖြစ်​သဖြင့်​ ​ကျေနပ်​ဝမ်း​မြောက်​မိသလို
​နေ့လည်​ကရခဲ့​သောဒဏ်​ရာများကလည်း နာကျင်​ကိုက်​ခဲ​နေ၍ဖြစ်​​လေသည်​ ။
လိမ်းစရာ ​ဆေးများမပါခဲ့သဖြင့်​ ပွန်းပဲ့ ​ရောင်​ကိုင်း​နေ​သောဒဏ်​ရာများက ည​​လေ​သွေးလို့ ​ချမ်း​လေတိုင်း
အစွမ်းပြ​နေပါ​တော့သည်​ ။ ကျ​နော်​တို့ စကားသိပ်​မ​ပြောဖြစ်​ကြပါ ။အ​တွေးကိုစီ ဖြင့်​ငြိမ်​​နေမိကြ​လေသည်​ ။
​နောက်​​နေ့ နံနက်​​စော​စောထ၍ ပြင်​ဆင်​သိမ်းဆည်းပြီးပြန်​ဆင်းခဲ့ကြ​လေသည်​ ။
အပြန်​ခရီးမှာ ကုန်းဆင်းဖြစ်​ခြင်း​ကြောင့်​လည်း​ကောင်း ၊ ဖထီး၏ လမ်းကျွမ်းကျင်​မှု​ကြောင့်​ ဖြတ်​လမ်းကိုအသုံးပြုခြင်း​ကြောင့်​လည်း​ကောင်း
အသွားတုန်းက ​အေး​အေး ​ဆေး​ဆေး ဖြင့်​တစ်​ညအိပ်​ခဲ့​သောခရီးကို အပြန်​တွင်​ ​နေ့ခြင်း​ပေါက်​ပြန်​ဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်​​လေသည်​ ။
​တောင်​​ခြေရွာကို​ရောက်​​တော့ ​တော်​​တော်​​မှောင်​​နေ​လေပြီ ။
အဆင်းဖြစ်​သဖြင့်​ ထမင်းစားချိန်​သာနားပြီးဆင်းခဲ့​လေ​သော​ကြောင့်​ ခရီး​တော့ပန်းလှပါသည်​ ။ အမိုး၏ တဲကို​ရောက်​​တော့မှ
ကိုယ်​လက်​သန့်​ပြီး ​ခြေပစ်​လက်​ပစ်​နားကြ​ပါ၏ ။
ထို​နေရာတွင်​ ချစ်​စရာ ​တောဓ​လေ့​လေးတစ်​ခုကို​တွေ့လိုက်​ရသည်​ ။
ကျ​နော်​တို့လူစု မိုးချုပ်​မှ​ရောက်​လာသဖြင့်​ ထမင်းဟင်းများ အဆင်​သင့်​မဖြစ်​ပါ ။ထို့​ကြောင့်​
ရွာထဲရှိအိမ်​များမှ ထမင်းများ ဟင်းများလာပို့ကြသည်​မှာ အလျှံအပယ်​ဖြစ်​​လေသည်​ ။
အများစုမှာ ငပိ​ထောင်း ၊ ငါး​ခြောက်​ဖုတ်​နှင့်​ ဟင်းရွက်​ပြုတ်​များဖြစ်​​သော်​လည်း
ငံငံစပ်​စပ်​ဖြင့်​ ထမင်းမြိန်​လှသည်​ကို​တော့ မှတ်​မိ​နေပါ​သေးသည်​ ။
ထိုညက … အမိုး၏ တဲအိမ်​​လေးထဲတွင်​ အိပ်​ရသည်​မှာ ​ပြောမပြတတ်​​အောင်​ပင်​ ဇိမ်​ရှိလှ​ကာ၏ ။
​​တောထဲမဝင်​မှီညက ခိုးလိုးခုလုဖြစ်​​သောဝါကြမ်းခင်းသည်​ ယခုအခါတွင်​​တော့…
​တစ်​ချက်​တစ်​ချက်​ တိုက်​ခတ်​လာ​သော ​ဆောင်းအကြွင်းအကျန်​​​လေနု​အေးသည်​ ကျ​နော်​တို့ကို​ချော့သိပ်​​နေသည့်​နယ်​ထင်​မှတ်​မိ​လေ​တော့သည်​ ….။
အထက်​ပါဖြစ်​ရပ်​များ ဖြစ်​ပွါးခဲ့ပြီး နှစ်​​ပေါင်း ၂၀ ​ကျော်​မျှကြာ​သောအချိန်​တွင်​ ………
ရန်ကုန်မြို့၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ကျိုက္ကဆံဘုရားအနီးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ဘုရင် မည်သော လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးတွင် အေးအေးလူလူ ထိုင်နေရင်းဖြင့် အားလပ်ခြင်း အရသာအား စီးကရက် အမြည်းဖြင့် ကောင်းကောင်းကြီး ခံစားလျက် ရှိနေလေ၏။ ဘုရင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေး ဖွင့်လှစ်ထားသည့် နေရာသည် ဆူညံ့လွန်းခြင်း၊ တိတ်ဆိတ်လွန်းခြင်း အစွန်းနှစ်ပါး လွတ်လျက် ရှိနေသည့်အတွက် အေးဆေးစွာ နေလိုသော ကျွန်ုပ်အတွက် သင့်လျော်သော နေရာတစ်ခု ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ချက် ပြုမိသေး၏။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေး၏ အတွင်းနံရံများတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပုံကားများအား ချိတ်ဆွဲ၍ ထားသည်ကို တွေ့မြင်ရလေ၏။ ကျွန်ုပ်လည်း ထိုပုံကားများအား ငေးမော ကြည့်ရှုရင်းဖြင့် ကျွန်ုပ် မမှီလိုက်သော်လည်း စာတွေ့ဖြင့် ရင်းနှီးခဲ့ပြီး လွန်စွာ လေးစားရသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ အကြောင်းအရာများအား စဉ်းစားမိလေ၏။ တစ်ဖန် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် စားပွဲထိုးလေး တစ်ဦး၏ လည်တွင် ဆွဲထားသော အနက်ရောင် အဝိုင်းပြားလေးအား မြင်မိပြန်ရာ ကျွန်ုပ် ဖတ်ဖူးသော ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်အတွင်းမှ ရတနာသိုက်အညွှန်း မြေပုံဆွဲပြားပေလော ဟူ၍ တောက်တီးတောက်တဲ့ တွေးမိပြန်သေးတော့၏။
ဤသို့ ကျွန်ုပ်သည် စီးကရက်သောက်ရင်း ဟိုတွေး၊ ဒီတွေး နေသည့်အခိုက်တွင် ဘုရင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေး၏ ရှေ့သို့ အနက်ရောင် ကားလေးတစ်စီး ထိုးရပ်လိုက်သည်ကို တွေ့လိုက်ရလေ၏။ ကားရပ်သွားသောအခါ ကားအတွင်းမှ လူကြီးတစ်ဦး ထွက်လာလေ၏။ ထိုလူကြီး၏ မျက်နှာတွင် အမွေးအမျှင်များ ထူထဲစွာ ပေါက်ရောက်နေသည်ကို တွေ့ရလေ၏။ အရပ်အမောင်း အားဖြင့်လည်း မနိမ့်လွန်း မနိမ့်လွန်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာမှာလည်း အတန် တုတ်ခိုင်လှသူ ဖြစ်လေသည်။ ထိုလူကြီးကို မြင်မိပြန်သောအခါ ကျွန်ုပ်လည်း ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ ဇာတ်ကောင် ဖြစ်သော ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွား အား ပြေး၍ မြင်မိပြန်သေးတော့၏။ ထိုလူကြီးနှင့် ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွားသည် ထိပ်ပြောင်ခြင်း၊ မပြောင်ခြင်း သာလျှင် ကွာခြားလိမ့်မည်ဟု မှတ်ချက်ပြုမိပြန်သေးတော့၏။
ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားနှင့် တူသော ထိုလူကြီးအား ကျွန်ုပ် ကြည့်ရှု၍ မှတ်ချက်ပြုနေသည့် အခိုက်တွင်ပင် ကျွန်ုပ်ထိုင်နေလျက် ရှိသော စားပွဲဝိုင်းတွင် ဝင်ရောက် ထိုင်လေ၏။ ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်အား ပြုံးပြ နှုတ်ဆက်ကာ ….
“မောင်ရင် … ရောက်နေတာ ကြာပြီလား”
ဟူ၍ မေးလေ၏။ ထိုအခါ ကျွန်ုပ်မှလည်း တစ်ဖန် ပြန်လည် ပြုံးပြ၍ …
ဟူ၍ ပြောလိုက်ရလေ၏။ ထိုလူကြီးကား ကျွန်ုပ်၏ ချစ်ခင်ရပါသော မိတ်ဆွေကြီး ဦးသာ ဖြစ်လေသည်။ ဦးသာ သည် ထူးခြား ဆန်းကြယ်လှသော အဖြစ်အပျက်များအား ကျွန်ုပ်အား ပြောပြတတ်လေ၏။ အချို့ အကြောင်းအရာများမှာ သူ၏ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်လေသည်။ အထူးအဆန်း စိတ်ဝင်စားသော ကျွန်ုပ်အတွက်မူ ဦးသာ ပြောသမျှ တို့သည် စိတ်ဝင်စားဖွယ် အကြောင်းအရာများဖြင့် ပြည့်နှက်နေတတ်လေသည်။ ဦးသာနှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်လတွင် တစ်ကြိမ်ခန့် တွေ့ဆုံတတ်ပြီး စကားစမြည် ပြောတတ်ကြလေသည်။ ယခုလည်း ကျွန်ုပ်မှ ချိန်းဆိုထားသဖြင့် ဦးသာသည် ကျွန်ုပ် ရှိရာသို့ ရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်လေသည်။
ဦးသာ အတွက် မှာယူထားသော လက်ဖက်ရည် ကျစိမ့် တစ်ခွက်အား စားပွဲထိုးလေးမှ လာရောက် ချပေးသောအခါ ဦးသာသည် ဇွန်းလေးဖြင့် လက်ဖက်ရည်ခွက်အတွင်းမှ နို့ဆီများအား ဖယ်ရှားနေသည်ကို တွေ့ရလေသည်။ ယင်းအတွက်ကြောင့် ဦးသာ သည် လက်ဖက်ရည် ခပ်ကျကျ သောက်ရခြင်းကို နှစ်ခြိုက်သူ တစ်ဦး ဖြစ်မည်ဟု ထင်မှတ်မိလေ၏။ ကျွန်ုပ်လည်း ဦးသာ သောက်ရန်အတွက် စီးကရက် ကမ်းရလေ၏။ ဦးသာ သည် စီးကရက် ကြိုက်သူ တစ်ဦး ဖြစ်သည့်အတွက် စီးကရက် ကြိုက်သော ကျွန်ုပ်နှင့် အကျွမ်းဝင်လှခြင်း ဖြစ်ပေမည်ဟူ၍လည်း ထင်မှတ်မိပြန်သေး၏။
ဦးသာ သည် လက်ဖက်ရည် တစ်ငုံသောက်ပြီးနောက် စီးကရက်အား မီးညှိရှိုက်ဖွာလိုက်ပြီး စကားစလေ၏။
“မောင်ရင် … ဂျိုး အမြုတေ ဆိုတာ ကြားဖူးသလား”
“ကြားတော့ ကြားဖူးပါတယ် ဦးသာ၊ ငယ်ငယ်တုန်းက ကြားဖူးတာဗျ။”
“အင်း … ကြားဖူးတယ် ဆိုတော့ ပိုပြောလို့ ကောင်းတာပေါ့။ ဒီလို မောင်ရင်ရဲ့ …. ကျုပ်တို့ လူပျိုလောက် အရွယ်လောက်ကပေါ့။ ဂျိုး အမြုတေ ဆိုတာ အတော်နာမည်ကြီးခဲ့တာပေါ့။”
​မောင်​ဆာမိ ၊ အံစာတုံး
(အမှတ်​တရ အတူတကွ​ရေးသားသည်​ )
လာဖတ်တာပါ ဥဥဆာ .. ဟီးးဟီးး
ဇာတ်သိမ်းကို ဥဥဆာ မကြွဘူးဆိုတာ သိပေမယ့်
နောက်ကနေ ခုန်အုပ်လိုက်တယ်လည်း ဆိုရော …
အယ် .. ဆိုပီး ဖစ်တွားသေးး
တော်ဒေးဒါပေါ့ … ဖထီး ဖစ်နေရို့ …
အစအဆုံး တိတ်တိတ်လေးဖတ်၍ သည်းထိတ်ရင်ဖိုဖြစ်သွားပါသည်…
ဦးဆာနှင့် အံဇာ… စာရေးလွန်စွာကောင်းကြောင်း ချီးကျူးဂုဏ်ပြုသွားပါ၏…
နောက်ထပ် နှစ်ပိုင်းလောက် ဆက်ဦးမယ်မှတ်နေတာ ဦးဆာရ
တောဝက်သားလေးမှ မစားလိုက်ရ ဗျာ….
ကံကောင်းလို့ပါလားကိုဆာမိရယ်။ ဖထီးလိုက်ဖမ်းတာမြန်လို့ပေါ့ မဟုတ်လို့ကတော့ လမ်းပျောက်သွားရင် ပိုဆိုးမယ်နော်။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာအပြည့်နဲ့ပိုစ့်ကောင်းကလေးပါ
ဒေးဒရဲ နားက ဧက ၅၀၀ လောက်ရှိတဲ့ ၀ါးတောထဲမှာ ညနေ စောင်း ၅ နာရီလောက်ကနေ ည ၁၀ နီးနီး ထိ လမ်းပျောက်ခဲ့ဖူးပါသည်။ မှတ်မှတ်ရရ တန်ဆောင်မုန်း လပြည့် နေ့ပါ။ ဓာတ်မီး ကော လူကော ရေထဲ ပြုတ်ကျ လို့ လရောင်အားကိုး နဲ့ စမ်းတ၀ါးဝါး . . . . ဗျောက်အိုး သံ လေးကို နားစွင့် ရင်း အဲ့ အသံ လာရာ ကို သွားခဲ့ရတာ ဗျို့  . . . . တစ်သက် မမေ့ နိုင်စရာပဲ . .. အိမ်နဲ့ ဖုန်းပြော နေလို့ ရနေလို့ သာ ဖြေသာတယ်။
တို့နှင့်တကွ ဖတ်ရှုအားပေးသူများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း …..
Hog လို့ခေါ်တဲ့..တောဝက်တွေ..အမေရိကားတိုက်မှာ… အကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးခဲ့ဖူးတယ်..
အဲဒီအကောင်မျိုးဆို… ဒူးလေးနဲ့ပစ်ရင်.. သွားဖြဲပြမလားပဲ..။
အဲဒီလိုအကောင်ကို… ဘာဂျိုးဥအမြုမှမတေပဲ.. ယူအက်စ်.. အလဘားမားမှာတော့.. အသက်၁၁နှစ်ကောင်လေးပစ်သတ်လိုက်သတဲ့..
ဒီပုံကို … ဒီရွာထဲတင်.. ၁ခါညွှန်းခဲ့ဖူးတယ်…
ကိုရင်ဆာမိရေ.. ဂျိုးမတေဥလေးများရမလားလို့ အားပေးလာတာ
မနိုရဲ့ ရာဘာခြံထဲမှာလဲ တောဝက်ခြေရာတွေ တစ်ခါတစ်လေတွေ့ရပါတယ်
အော်…. ဖထီးနှယ် ဗန္ဓုလသွေးကိုမှ တောထဲခေါ်သွားတာကိုးးးးး
(​တောထဲတွင်​ လူမသ်ိသူမသိ မရှုမလှ​ဖြင့်​​တောဝက်​ထိုးပြီး​သေ​ရ​သောကျ​နော့်​အဖြစ်​သည်​ ဆိုးဝါးလှသည်​..)
အဲလိုမှ သတင်းဖြစ်၊ ဂျာနယ်တွေထဲမှာပါပြီး သေပြီးမှ နာမည်ကျော်ကြားသွားအုံးမှာ။
ဂျိုးအမြုတေအစစ်က အနော့်ဆီမှာဂျ.. သူတခါတခါ ပွတက်လာလျင် အောင်မငှီး ကျောင်းစရာဂျီး..